20 Devid wee si na Nayọt nke dị na Rema gbapụ.+ Otú ọ dị, ọ bịara kwuo n’ihu Jọnatan, sị: “Gịnị ka m mere?+ Gịnị ka m mejọrọ, gịnịkwa bụ mmehie m mere nna gị, n’ihi na ọ na-achọ mkpụrụ obi m?” 2 O wee sị ya: “Tụfịakwa!+ Ị gaghị anwụ. Lee! Nna m agaghị eme ihe ọ bụla, ma ọ bụ ihe ukwu ma ọ bụ ihe nta, ma ghara ịkọrọ m;+ gịnị mere nna m ga-eji zochiere m ihe a?+ Nke a anaghị eme eme.” 3 Ma Devid ṅụrụ iyi+ ọzọ, sị: “Ọ ghaghị ịbụ na nna gị maara na ihe m dị gị mma,+ ọ ga-asịkwa, ‘Ekwela ka Jọnatan mata ihe a ka ọ ghara iwute ya.’ Ma, n’ezie, dị nnọọ ka Jehova dị ndụ,+ dịkwa nnọọ ka mkpụrụ obi gị dị ndụ,+ ọ bụ naanị ihe dị ka otu nzọụkwụ dị n’agbata mụ na ọnwụ!”+ 4 Jọnatan wee sị Devid: “Ihe ọ bụla mkpụrụ obi gị kwuru, m ga-emere gị ya.” 5 Devid wee sị Jọnatan: “Lee! Echi bụ ụbọchị ememme ọnwa ọhụrụ,+ ekwesịrị m ịhụ na m so eze nọdụ ala rie nri; hapụ m ka m pụọ, m ga-ezokwa+ n’ọhịa ruo mgbede n’ụbọchị nke atọ. 6 Ọ bụrụ na e nwee ka nna gị si chọọ m, ị ga-asị ya, ‘Devid rịọsiri m ike ka m nye ya oge ka ọ gbaga Betlehem+ bụ́ obodo ya, n’ihi na e nwere àjà a na-achụ n’ebe ahụ kwa afọ maka ezinụlọ ya dum.’+ 7 Ọ bụrụ na ọ sị, ‘Ọ dị mma!’ ihe ọ pụtaara ohu gị bụ udo. Ma ọ bụrụ na o nwee ka o si wee iwe, mara na o kpebiwo ime ihe ọjọọ.+ 8 Ị ga-egosikwa ohu gị obiọma,*+ n’ihi na ndụ i mere ka gị na ohu gị gbaa bụ ọgbụgba ndụ+ Jehova. Ma ọ bụrụ na e nwere ihe m mejọrọ,+ jiri aka gị gbuo m, gịnị mere ị ga-eji kpọgara m nna gị?” 9 Jọnatan wee sị: “Echela ụdị ihe ahụ n’obi gị! Ma ọ bụrụ na o nwee otú m si mara na nna m kpebisiri ike ime gị ihe ọjọọ, ḿ gaghị akọrọ gị ya?”+ 10 Devid wee sị Jọnatan: “Ònye ga-agwa m ma ọ bụrụ na nna gị azaa gị n’olu ike?” 11 Jọnatan wee sị Devid: “Bịagodi, ka anyị pụọ gaa n’ọhịa.” Ha abụọ wee pụọ gaa n’ọhịa. 12 Jọnatan wee sị Devid: “Ka Jehova bụ́ Chineke Izrel+ bụrụ onye akaebe+ na m ga-ajụta echiche nna m ụdị ugbu a echi, ma ọ bụ nwanne echi, ọ bụrụkwa na obi dị ya mma n’ebe Devid nọ, ḿ gaghị ezi gị ozi ma kọọrọ gị ya? 13 Ọ bụrụ na nna m achọọ ime gị ihe ọjọọ, ma akọghịrị m gị ya wee mee ka ị gbalaga, i wee ghara ịla n’udo, ka Jehova mee Jọnatan otú a, ka ọ tụkwasịkwa+ ihe na ya. Ka Jehova nọnyere gị,+ dị nnọọ ka ọ nọnyeere nna m.+ 14 Ọ bụrụkwa na m ka ga-adị ndụ,+ ọ̀ bụ na ị gaghị egosi m obiọma Jehova, ka m wee ghara ịnwụ?+ 15 Ị gaghị ewepụ obiọma gị n’ezinụlọ m ruo mgbe a na-akaghị aka.+ Mgbe Jehova ga-ebipụ ndị iro Devid, bipụ onye ọ bụla n’ime ha n’elu ala, 16 a gaghịkwa ewepụ aha Jọnatan n’ụlọ Devid.+ Jehova ga-ajụtakwa ya n’aka ndị iro Devid.” 17 Jọnatan wee ṅụọrọ Devid iyi ọzọ n’ihi ịhụnanya o nwere n’ebe ọ nọ; n’ihi na ọ hụrụ ya n’anya dị ka o si hụ mkpụrụ obi nke ya.+ 18 Jọnatan wee gaa n’ihu ịsị ya: “Echi bụ ụbọchị ememme ọnwa ọhụrụ,+ a ga-achọkwa gị achọ, n’ihi na oche gị ga-atọgbọ nkịtị. 19 Nwanne echi, a ga-achọsi gị ike; ị ga-abịakwa n’ebe ahụ i zoro+ n’ụbọchị a na-arụ ọrụ, ị ga-anọkwa nkume a dị n’ebe a nso. 20 Ma mụ onwe m ga-agbapụ akụ́ atọ n’otu akụkụ ya, gbaga ha n’ebe m chọrọ ka ha gaa. 21 Lee! M ga-ezi onye na-ejere m ozi, sị, ‘Gaa, chọta akụ́ ndị ahụ.’ Ọ bụrụ na mụ agwa onye ahụ na-eje ozi kpọmkwem, sị, ‘Lee! Akụ́ ndị ahụ dị n’akụkụ gị nke a, weta ha,’ mgbe ahụ, ị ga-abịa, n’ihi na dị nnọọ ka Jehova dị ndụ,+ ọ pụtaara gị udo, ọ dịghị nsogbu dịnụ. 22 Ma ọ bụrụ na mụ asị nwa okoro ahụ, ‘Lee! Akụ́ ndị ahụ dị anya n’ebe ị nọ,’ gbalaga, n’ihi na Jehova agwawo gị ka ị gbalaga. 23 A bịa n’okwu anyị kwuru,+ ihe mụ na gị kwuru, ka Jehova bụrụ onye akaebe n’etiti mụ na gị ruo mgbe a na-akaghị aka.”+ 24 Devid wee zoo n’ọhịa.+ Ụbọchị ememme ọnwa ọhụrụ wee ruo, eze wee nọdụ ala n’oche ka o rie ihe.+ 25 Eze nọ ọdụ n’oche ya dị ka n’oge ndị ọzọ, n’oche dị n’akụkụ ahụ́ ụlọ; Jọnatan chekwara ya ihu, Abna+ nọ ọdụ n’akụkụ Sọl, ma oche Devid tọgbọ nkịtị. 26 Sọl ekwughị ihe ọ bụla ma ọlị n’ụbọchị ahụ, n’ihi na ọ gwara onwe ya, sị: “Ọ dị ihe merenụ nke mere ka ọ ghara ịdị ọcha,+ n’ihi na e mebeghị ka ọ dị ọcha.” 27 O wee ruo n’ụbọchị na-esote ụbọchị ememme ọnwa ọhụrụ, n’ụbọchị nke abụọ, na oche Devid ka tọgbọ nkịtị. Sọl wee sị Jọnatan nwa ya: “Gịnị mere nwa Jesi+ abịaghị rie nri ma ụnyaahụ ma taa?” 28 Jọnatan wee zaa Sọl, sị: “Devid rịọsiri m arịrịọ ike ka m nye ya oge ka ọ gaa Betlehem.+ 29 O wee sị, ‘Biko, hapụ m ka m lawa, n’ihi na anyị nwere àjà ezinụlọ anyị ga-achụ n’obodo, ọ bụkwa nwanne m nyere m iwu. Ya mere, ọ bụrụ na ihe m dị gị mma, biko, ka m mịpụ gaa hụ ụmụnne m.’ Ọ bụ ya mere na ọ bịabeghị na tebụl eze.” 30 Sọl wee weso Jọnatan iwe+ dị ọkụ, o wee sị ya: “Gị nwa ohu nwaanyị na-enupụ isi,+ ọ̀ bụ na mụ amaghị na ị na-ahọrọ nwa Jesi ka i wee menye onwe gị ihere, menyekwa ihe nne gị ji bụrụ nwaanyị ihere?+ 31 N’ihi na ruo ụbọchị niile nwa Jesi dị ndụ n’elu ala, gị na ọbụbụeze gị agaghị eguzosi ike.+ N’ihi ya, zie ozi kpọtara m ya, n’ihi na ọ ga-anwụrịrị.”+ 32 Otú ọ dị, Jọnatan zara Sọl nna ya, sị ya: “Gịnị mere a ga-eji gbuo ya?+ Gịnị ka o mere?”+ 33 Sọl wee tụọ ya ube ka ọ tụgbuo ya;+ Jọnatan wee mara na nna ya ekpebisiwo ike igbu Devid.+ 34 Ozugbo ahụ, Jọnatan ji iwe ọkụ+ si na tebụl bilie, o righịkwa nri n’ụbọchị nke abụọ mgbe ụbọchị ememme ọnwa ọhụrụ gasịrị, maka na a kpasuwo ya iwe n’ihe banyere Devid,+ n’ihi na nna ya ewedawo ya ala.+ 35 O wee ruo n’ụtụtụ na Jọnatan pụrụ gaa n’ọhịa bụ́ ebe ha kwekọrịtara na Devid ga-anọ,+ nwatakịrị na-ejere ya ozi sokwa ya. 36 O wee sị onye ahụ na-ejere ya ozi: “Biko, gbara ọsọ gaa chọta akụ́ ndị a m ga-agbapụ.”+ Onye ahụ na-ejere ya ozi gbapụrụ, ya onwe ya gbara akụ́ ahụ ka ọ gafere ya. 37 Mgbe onye ahụ na-ejere ya ozi bịarutere ebe ahụ akụ́ ahụ Jọnatan gbara dị, Jọnatan nọ n’azụ malite ịkpọ onye ahụ na-ejere ya ozi, sị: “Ọ́ bụghị n’ihu ihu gị ka akụ́ ahụ dara?”+ 38 Jọnatan wee nọrọ n’azụ onye ahụ na-ejere ya ozi tie mkpu, sị: “Ngwa ngwa! Mee ọsọ ọsọ! Akwụsịla akwụsị!” Onye na-ejere Jọnatan ozi tụtụtara akụ́ ndị ahụ wee bịakwute nna ya ukwu. 39 Ma onye ahụ na-ejere ya ozi amataghị ihe ọ bụla; naanị Jọnatan na Devid maara banyere ihe ahụ. 40 E mesịa, Jọnatan chịnyere onye na-ejere ya ozi ngwá ọgụ ya wee sị ya: “Lawa, chịlaa ha n’obodo.” 41 Onye ahụ na-ejere ya ozi wee lawa. Ma Devid si n’akụkụ ebe ndịda bilie. O wee gbuo ikpere n’ala, kpudo ihu n’ala,+ kpọọ isiala ugboro atọ; ha wee malite isusu ọnụ+ ma na-akwara ibe ha ákwá ruo mgbe Devid kwakarịrị.+ 42 Jọnatan wee sị Devid: “Laa n’udo,+ ebe anyị ṅụworo iyi,+ anyị abụọ, n’aha Jehova, sị, ‘Ka Jehova bụrụ onye akaebe n’etiti mụ na gị nakwa n’etiti ụmụ m na ụmụ gị ruo mgbe a na-akaghị aka.’”+ Devid wee bilie lawa, Jọnatan wee bata n’obodo.